induction annealing maitiro-Nei kushandisa induction kusimbisa
Induction Annealing Maitiro
HLQ Induction mutungamiri mune induction kupisa mabasa Induction annealing inogonesa chaiyo uye yakavimbika kutonga kwesimbi zvinhu zvivakwa. Induction annealing inonyanya kushandiswa kupfava uye kushushikana-kununura kunyorera, ichipa hukuru hwakakura pamusoro penzira dzakajairika. Induction annealing inogonesa kupisa kwese kwetsvina panguva inopenya annealing. Induction annealing inonyanya kushandiswa mune yakapfava annealing uye kushushikana-kununura annealing uye inopa zvakakurisa mabhenefiti pane zvakajairika nzira.Induction annealing inogonesa iyo yekutsva inobvisa iyo tsvina mune izvo zvinhu panguva inopenya annealing.
Induction Annealing isimbi kupisa kurapwa uko simbi zvinhu zvinoiswa kune yakakwidziridzwa tembiricha kwenguva yakareba uye zvobva zvadzikama zvishoma nezvishoma. Kuwedzera kunonyanya kuve nekushandurwa kwema micro-echimisikiro shanduko ayo anozopedzisira ave nebasa rekushandura zvinhu zvemagetsi. Chinangwa chekupedzisira cheichi chiitiko ndechekuderedza kuomarara kwesimbi uye nekuvandudza ductility yayo.
Miseve yekuisa mapepa inonyatsoreva nzira yekuunza iyo zvinhu kune yavo yakapfava pfungwa. Kuita kwedu kwemiedzo kunorerutsa simbi asi kwete kuzere zvakakwana. Chiyero chehasha chinotsamira pane izvo zvinhu, tembiricha yakanyanya kusvika uye kureba kwenguva inotonhora pasi. Maitiro kana kushungurudzika kusimudzira annealing anoshandiswa kukanganisira migumisiro yebasa rinotonhora; ndiko kuti, kunyorovesa uye kuwedzera ductility yesimba raimbove rakaomeserwa simbi. Kunetseka kwemukati kunogona kukura semhedzisiro yemapurasitiki ekushanduka maitiro akadai sekumhanyisa kana kukuya, kutonhora kusiri yunifomu muchimiro chekukandira kana kukanda, kana chikamu cheshanduko. Kuvhiringidza uye kurira kunogona kuitika kana kushungurudzika kwemukati kusiri kubviswa. Kusimudza kuchabvisa kushushikana uku kana chikamu chikapiswa kumweya wekudziya wakakurudzirwa, uchibatirwa ipapo nguva yakaringana, uye zvishoma nezvishoma wakaripirwa kumhepo tembiricha.
Nei uchifanira kushandisa zvinongedzo?
Yemazuva ano induction Heating inopa akawanda mabhenefiti pane dzimwe nzira dzekupisa uye inowanzo shandiswa kune annealing kunyorera. Kuchenesa kuburikidza ne induction kunopa kutendeseka, kudzokororwa, kusabatana uye simba-rinoshanda kupisa munguva shoma yenguva. Solid mamiriro masisitimu anokwanisa kudziisa madiki nzvimbo mukati meyakajeka kugadzirwa kushivirira, pasina kukanganisa munhu metallurgic maitiro. Induction inogona kushandiswa kune chero pamusoro kana kuburikidza nekupisa; kesi yekuwedzera inokwanisika zvichienderana nenguva, tembiricha uye hunhu hwechinhu.
Induction annealing ishoko rakafanana naro rinoreva kupisa simbi kune yakatarwa kupisa uyezve kuchitonhora pamwero unozoburitsa yakanatswa micostructure. Uchishandisa Induction, simbi inogona kukurumidza kupisa kupisa pamhepo inodzorwa isina kutenderedzwa isinga sangana nechinangwa chesimbi kana kupisa mhepo yakatenderedza yakatenderedza Mhepo dzinotonhorera dzemasimbi anonamira kazhinji mumhepo yakavhurika zvichikonzera kuumbwa kweparera. Simbi dzisingapfuure, dzakadaro ndarira kana ndarira, dzinogona kuiswa nekukurumidza kutonhora nekudzima mumvura. Mhedzisiro yacho "nyorovesa" chinyorwa uye chichiita kuti zvive nyore kugadzirwa kuchimiro chinodiwa.
Induction Annealing inowanzoshandiswa mukuwedza waya, chaiyo yekugadzira maturusi, uye tube kugadzira manyorerwo. Typical midziyo induction annealing inosanganisira aluminium, kabhidhiyamu, uye carbide. Mamwe mabhenefiti eInduction annealing ndeaya: simba pane zvinodiwa; kukurumidza kupisa mitsetse; kubviswa kwesimba rinopfuurira kune yakakura yekushisa nzvimbo (kureva oven); kuchengetedza kwemitengo nekuda kwekudzora kwesimba simba; kutungamira kwekushisa kwesimbi uye kwete iyo ambient mweya senge mune convection maitiro; nzira yakachengeteka kupfuura nzira dzakavhurika dzemurazvo; yakagadziridzwa maitiro ekugadzirisa kunyangwe kudziya uye yunifomu yekushisa kune yakapihwa tembiricha isingatsamiri pahunyanzvi hweanoshanda.
Sei usarudze HLQ induction yekuita induction?
Isu tiri vatungamiriri vemaindasitiri mukupisa kupisa nemahofisi muChina.
Induction annealing imhando yekupisa kupisa ne induction heater, kupisa simbi kune yakatarwa tembiricha uye ozotonhora pamwero unozoburitsa yakanatswa micostructure. Uchishandisa Induction kupisa, simbi inogona kukurumidza kupisa kumhepo tembiricha inodzorwa nemhepo isina kutenderera isina kubata tarisiro yesimbi, zvinhu zvinowanzo kuvezwa mumhepo yakavhurika. Mhedzisiro yacho "nyorovesa" chinyorwa uye chichiita kuti zvive nyore kugadzirwa kuchimiro chinodiwa.
Kubatsira kwekuchinjisa pamwe nekudziya kupisa:
1. Yakakwirira kugadzirwa mitengo
2. Yakaderera nzvimbo yekudziya uye isingagarwi inoda simba (seiko oveni)
3. Sevha mutengo nekuda kwekuwedzera kugadzirwa uye kuderedzwa kwemabasa evashandi
4. Easy kudzora kupisa nguva uye tembiricha
Nekuti isu inyanzvi yekusimudzira kupisa, vatengi vedu vanobatsirwa kubva pakabatanidzwa induction annealing mhinduro mune akawanda maindasitiri.
Vatengi vedu vanodzivisa kunyanyisa kuwanikwa uye chikamu chinobata kuburikidza nekushandisa induction annealing, izvo zvinokonzeresa kutambisa marara uye kunatsiridzwa mhedzisiro pamutengo wakaderera.Tine top-notch tekinoroji, michina, uye maitiro ekupa zvikamu zvinosangana nemhando yepamusoro yepamusoro.